Nyi Mu Yar: ခေါက်ဆွဲထုပ်များနှင့် ကခုန်ခြင်း
at Wednesday, April 15, 2009 Labels: General , MM Posted by nyimuyar
တို့လည်း ခေါက်ဆွဲပဲ စားရတာ။
အရင်တုန်းကများ ယမ်ယမ်ချဉ်စပ်ကို အိုးနဲ့တည်၊ ကြက်ဥဖောက်ထည့်၊ ပွက်ပွက်ဆူရင် ကန်ဇွန်းရွက်အချောင်းလိုက်ထည့်ပြီး သူငယ်ချင်းနဲ့အတူတူ မြ၀တီဇတ်ကားစောင့်ရင်းစားခဲ့တာတွေ သတိရတယ်။ တစ်ယောက်တည်းနေတော့မစားဖြစ်တော့ဘူး... း(
ကျွန်တော့် သက်ထွေး.. အဲလေ `သက်ထား´ကတော့ Koka တံဆိပ်ကို ကြိုက်တယ်။ Spicy ဟာ။ အတော်ကောင်းတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ရှောက်ရွက်လိုမျိူးပါပြီး မွှေးတယ်။
တစ်ခါတစ်လေမှ စားဖြစ်တယ်။ စားဖြစ်ရင်တော့ Cup သေးသေးကလေး နဲ့လာတဲ့ ခေါက်ဆွဲ စားဖြစ်တယ်။
ZT လို ဗူးလေးတွေနဲ့ ခေါက်ဆွဲလည်း
ကိုညီမူယာတို့ ခေါက်ဆွဲပြုတ်တွေ သိပ်စားသလိုထင်ရတယ်...။
အများကြီးစားရင် မကောင်းဘူး ထင်တယ်နော်...။
စင်ဒန်လား - ခုတော့ ခေါက်ဆွဲ ကို နည်းနည်းခြင်းစီ လျှော့စားနေရတယ်။ ကိုအန်ဒီ ပြောသလို ကိုက တံဆိပ်လည်း စားဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတံဆိပ်ကို ပိုသဘောကျမိတယ်။
ဇက်တီ - ခွက်နဲ့ ခေါက်ဆွဲက နည်းတော့ မ၀ဘူးဗျ၊ ဒါနဲ့ အထုပ်ပဲ စားတော့တယ်။
စန္ဒကူးမေ- ယမ်ယမ်ချဉ်စပ်လည်း ကောင်းတာပါပဲ။ ကင်မ်ချီ ခေါက်ဆွဲလည်း ကောင်းတာပါပဲ။
ဖြိုးမော် - ခေါက်ဆွဲထုပ်တွေ ကတော့ တိုက်ဆိုင်တိုင်း စားဖြစ်နေတာပါပဲ ညီရေ
You can fry these noodles as well. Put onion and some vegetables into hot oil (a bit) and put already boiled noodle. Finally, put other ingredients and fry them.
In Thailand, it is called Phet Ma Ma.
ခေါက်ဆွဲထုတ် သိပ်မစားဖြစ်ပါ။ ဟိုးအရင်ကစားဘူးတာ ဆံပင်ကျွတ်တာ သတိထားမိပါတယ်။ တံဆိတ်လေးတွေ မှတ်ထားမယ်။ တခါတရံသွေးတောင်းရင် စားရအောင်။